ဘာကြောင့်သင့်ကလေးကို ဆွေမျိုးတစ်ယောက်အား ပွေ့ဖက် ရန် တွန်းအား မပေးသင့်သလဲ - Hello Sayarwon
ဘာကြောင့်သင့်ကလေးကို ဆွေမျိုးတစ်ယောက်အား ပွေ့ဖက် ရန် တွန်းအား မပေးသင့်သလဲ
လူများစွာသည် ငယ်စဉ်က ဆွေမျိုးတစ်ယောက်အား ပွေ့ဖက်ရန် သို့မဟုတ် နမ်းရန် မိဘများက ခိုင်းခဲ့သည်ကို မှတ်မိကြမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆွေမျိုးများအား ချစ်ခင်ရန် တန်ဖိုးထားတတ်ရန် ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ယနေ့ ခေတ်တွင် ဆွေမျိုးများက ကလေးငယ်များအပေါ် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာနေသောကြောင့် မိဘ များသည် ထိုအပြုအမှုကို မခိုင်းခင် နှစ်ခါပြန် စဉ်းစား သင့်သည်။
တွန်းအားပေးခြင်းသည် သင့်ကလေးကို ခြိမ်းခြောက်မှုများထံ ပြသနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ကလေးများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း အများစုတွင် အလွဲသုံးစားလုပ်သူများသည် ကလေး၏ မိသားစုနှင့် ကောင်းစွာသိသူများဖြစ်ပြီး ကလေးနှင့် မိဘများ နှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ယုံကြည်ထိုက်သော နေရာတွင် ရှိသူ များဖြစ်သည်။ ဆွေမျိုးများသည် ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ ဆွေမျိုး များအားလုံးသည် မကောင်းသော ရည်ရွယ်ချက် ရှိသည်ဟု မဆိုလိုသော်လည်း ကလေးများအား သူတို့ကို ဖက်ခိုင်းခြင်း သည် ကလေးနှင့် ဆွေမျိုးများကြား အရေပြားချင်း ထိတွေ့မှု ကို မိဘများက ခွင့်ပြုထားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
မကောင်း သော အကြံညဏ်ရှိသူများသည် ၎င်းကို ကလေးများအား လွယ်ကူစွာရနိုင်သည်ဟု ထင်သွားပြီး အလွဲသုံးစား လုပ်ကြ သည်။ အထူးသဖြင့် ဆွေမျိုးများမှ အလွဲသုံးစား လုပ်ခံရသော ကလေးများသည် မိဘများကို တိုင်ရန် ကြောက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် သူတို့ထက် အလွဲသုံးစား လုပ်သူကို မိဘများက ပိုယုံသည်ဟု ထင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကလေးများကို ဆွေမျိုးများဖြင့် ခန္ဓါကိုယ်ချင်း ထိတွေ့ရန် အားပေးခြင်းကြောင့် မိဘများသည် အလွဲသုံးစား လုပ်သူများကို ကလေး၏ ဘေးကင်းသော ဇုန်ထဲသို့ ဝင်ခိုင်း လိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။
တွန်းအားပေးခြင်းသည် သင့်ကလေးကို မှားသော နည်းလမ်း ဖြင့် သင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆွေမျိုးတစ်ယောက်ကို ဖက်ရန် အားပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ကလေး၏ စိတ်ထဲတွင် ခန္ဓါကိုယ်လုပ်ပိုင်ခွင့် ခံစားမှုတစ်ခု တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အခြားလူ များဖြင့် ခန္ဓါကိုယ်ချင်း ထိတွေ့ခြင်းသည် ပုံမှန်အရာတစ်ခုဟု ထင်သွားပြီး ထိတွေ့မှုများကို ငြင်းရန် မကြောက်တော့ပါ။ ကလေးကို မိမိကိုယ်ကို ချစ်ရန်၊ တန်ဖိုးထားရန် သင်ပေးမည့် အစား မိဘများသည် ကလေး၏ ကိုယ်ပိုင်နေရာကို ကျူးကျော် ရာရောက်သည်။
အရေပြားချင်းထိတွေ့စေခြင်းမှ ရရှိနိုင်သော တစ်ခုတည်းသော သင်ခန်းစာမှာ ကလေးများသည် အခြား လူများ ကျေနပ်စေရန် သူတို့၏ ခန္ဓါကိုယ်ကို အသုံးပြုသင့် သည်ဟု ထင်သွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသော ကလေး တစ်ယောက်သည် သူတို့၏ ခန္ဓါကိုယ်ကို မိဘများပင် မပိုင် ကြောင်း၊ သူတို့ခန္ဓါကိုယ်သည် သူတို့ကိုယ်ပိုင်သာ ဖြစ်ကြောင်း သင်ယူသင့်သည်။
ကလေးများသည် ဆွေမျိုးများ သို့မဟုတ် အခြားလူများ ဖြင့် ဘယ်လိုအရေပြားချင်းထိတွေ့သလဲဆိုတာ မိဘများက သေချာ ဂရုစိုက်ကြည့်သင့်သည်။ မသက်မသာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါက သူတို့ကို အခြားလူများနှင့် ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ နမ်းခြင်း မလုပ်ခိုင်းသင့်ပါ။ ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ နမ်းခြင်းသည် စစ်မှန်သော ခံစားချက်၏ ရလဒ်များသာဖြစ်သင့်သည်။ ချစ်ခင်မှုကို အတင်း အကြပ် လုပ်မယူနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း ကလေးများသည် သူတို့ဆွေမျိုးများအပေါ် ဖော်ရွေပြီး လေးစားသော အပြုအမူ များ ဆက်လက်ရှိသင့်သည်။
ဆွေမျိုးများမှ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါက ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
ဆွေမျိုးများနှင့် အရေပြားချင်းမထိခိုင်းခြင်းသည် မလေး စားသော၊ မကောင်းသော အပြုအမူမဟုတ်ကြောင်း မိဘများ က ရှင်းလင်းအောင်ပြောပါ။ ချစ်ခင်မြတ်နိုးသော်လည်း ဆွေမျိုး များသည် သူတို့၏ စည်းကို သိသင့်သည်။ ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ နမ်း ခြင်းအစား သူတို့သည် ကလေးများဖြင့် လက်ဝါးချင်းရိုက်ခြင်း၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း လုပ်နိုင်သည်။
ကလေးများကို ရွေးချယ်ခွင့် ပေးပါက ဆွေမျိုးများနှင့် ဆက်ဆံရန် သူတို့အတွက် ပိုပြီး သဘာဝကျလိမ့်မည်။ သူတို့ နောက်ထပ် အရေပြားချင်းထိတွေ့မှု လုပ်ချင်သလားဆိုတာ သူတို့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သည်။ ကလေးနှင့် ဆွေမျိုးများ၏ ခံစားမှုများကို အောင်မြင်စွာကိုယ်တွယ်နိုင်ခြင်းသည် မိသားစု ဆက်ဆံရေးနှင့် အပြုအမူများတွင် မမြင်မတော်ခြင်းများ မဖြစ် အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
Quick facts. https://www.parentsprotect.co.uk/quick_facts.htm/ Accessed March 20, 2017
Don’t Make Your Child Kiss or Hug Relatives. http://www.huffingtonpost.co.uk/sarah-ockwellsmith/making-your-child-kiss-or-hug-relatives_b_9663604.html/ Accessed March 20, 2017